समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा ‘खुसी’ - BBC News नेपाली
समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपा ‘खुसी’
समाजवादी पार्टीले सरकारबाट आफूलाई अलग्याएपछि तत्कालै त्यसको असर अर्को तराईकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समीकरणमा नपर्ने राजपाको अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यले बताएका छन्।
बरु त्यसले ती दुई तराईकेन्द्रित दलको एकता प्रक्रियामा बल पुग्ने उनले बताए।
"समाजवादी पार्टी सरकारबाट पहिले नै हटिसक्नुपर्थ्यो। ढिलो भयो, तर हामी खुसी छौँ," महेन्द्र राय यादवले बीबीसीलाई बताए।
समाजवादी पार्टीको सरकारबाट भएको बहिर्गमनले ढिलोचाँडो तीनवटा पक्षमा असर भने पर्ने देखिन्छ।
पहिलो, समाजवादी दल र राजपाबीचको एकता प्रक्रिया।
सहमति तोडेको आरोप लगाउँदै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो
प्रधानमन्त्रीको कदमले गलत सन्देश: उपेन्द्र यादव
"हो, अब निकट भविष्यमा गम्भीरतासाथ हामी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउँछौँ," यादवले भने।
दोस्रो असर भनेको समाजवादीले छाडेको ठाउँमा राजपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना। "तत्कालै त्यो सम्भावना देखिँदैन। पहिले हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेकै हो तर हाम्रा मुद्दाहरूमा अगाडि नबढेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएको हो," यादवको भनाइ थियो।
तर यो सम्भावना पूरै टरिसकेको भने देखिँदैन। किनभने गत सातामात्र सरकार र राजपाबीच अकस्मात् दुई बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअनुसार प्रदेश नं २ मा दुई दलले खाली हुन लागेको राष्ट्रिय सभाका चार सीट आधाआधा बाँडेर लिने उल्लेख छ। साथै त्यसको दोस्रो बुँदामा समसामयिक विषयमा सरकार र राजपाले सहकार्यको प्रक्रियालाई अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ।
"त्यो सहमति भनेको केवल चुनावी तालमेल मात्र हो। अगाडिको कुरा गर्दा त अब सरकारले हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्‍यो भने वातावरण बन्न सक्छ," यादवले बताए।
प्रदेश नं २ मा कस्तो असर?
तेस्रो असरचाहिँ जनकपुरमा देखिन सक्छ। तर त्यो पनि तत्काल देखिने सम्भावना न्यून नै छ।
यादवले त प्रदेश नं २ मा हाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार पाँच वर्ष पूरै चल्ने बताए।
तर राजपाकै अर्का नेता मनीष सुमनले भने अर्को सङ्केत गरेका छन्।
सुमनले राजनीतिमा केही पनि कुरा स्थायी नहुने भन्दै नेकपासँग केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गर्न सकिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा फेरि समर्थन गर्न राजपा नेपाललाई आग्रह
‘साथीहरू जेलमा, हामी कसरी सरकारमा जाने?’
उनले भने, "नेकपासँग भइरहेका छलफलहरूमा लामै साझेदारी गरेर जाने कुराहरू भइरहेका छन्। सभामुखको निर्वाचन पनि हुन लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी पनि हुँदैछ। त्यस प्रक्रियाका बेला केही हुन सक्छ।"
तर उनले पनि यादवले जस्तै त्यस्तो सत्ता साझेदारी गर्नुअघि नेकपाले केही मागहरू पूरा गर्नुपर्ने राजपाको अडान रहेको बताए।
त्यस्ता अडानहरूमा संविधान संशोधनको प्रत्याभूति, मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायत छन्।
अहिले प्रदेश नं दुईमा समाजवादी पार्टी र राजपा गठबन्धनको सरकार रहेको छ।
समाजवादी पार्टी के भन्छ?
समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले चाहिँ राजपाले नेकपासँग गरेको पछिल्लो सम्झौता र आफूहरूले सरकार छाडेको विषयले प्रदेश नम्बर दुईको सत्ता साझेदारीमा कुनै असर नपर्ने बताए।
उनले भने, "प्रदेश नम्बर २ को जनभावनाविपरीत ढङ्गले सरकारलाई तलमाथि गर्ने कुरालाई जनताले गम्भीर रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरा राजपाका परिपक्व नेताहरूले बुझ्नुभएको छ।"
पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई कतिपयले समाजवादी दल नेकपाबाट टाढिँदै गएको र राजपा नेकपासँग नजिकिँदै गएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
अर्काथरीले भने संविधान संसोधनलगायतका विषयमा दुवै दलका माग मिल्ने भएकाले त्यो सम्भावना कम रहेको बताउने गरेका छन्।
राजपा नेपाल: आन्तरिक विवाद गहिरिनुका कारण यस्ता छन्
२७ नोभेम्बर २०१८
नजिकिएकै हुन् राजपा र ओली ?
इजरेलका प्रधानमन्त्रीको 'कारबाही जारी राख्ने' दृढता